Kuthetha ukuthini ukuphupha abantwana? Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
Ukuphupha umntwana okanye okwethu sinokuthetha umnqweno ofihliweyo nocinezelweyo wokunqwenela izinto ezithile, okanye ukuzalisekisa amaphupha, kodwa angenakwenzeka ngalo mzuzu.
Ungalibali, ukutolikwa kwamaphupha kuyahluka ukusuka komnye umntu uye komnye, kukuwe ukuba ujonge ubomi bakho kwaye uzame ukutolika okwenzekayo.
1 Intsingiselo yokuphupha umntwana
2 Ukuphupha umntwana edlalayo
3 Ukuphupha umntwana efunda
4 Iphupha lomntwana ongaziwayo
5 Dlala ngomntwana ephupheni
6 Yondla abantwana
Intsingiselo yokuphupha umntwana
Ukuphupha umntwana kungabonisa umnqweno wokuqonda okanye wokungazi nto wokumisa ukuzibophelela okanye ubaleke uxanduva kunye noxanduva ngokubanzi. Kuba uninzi lwabantu abadala luyaliphosa eli xesha kuba akufuneki bajongane neengxaki ezinzima zobomi.
Ukuphupha umntwana edlalayo
Ukuphupha ngabantwana abadlalayo kulungile kakhulu kuba bamele ubuqhetseba, ubunyulu, ukungafihli kunye nezinye izinto ezintle zobomi esihlala silibale ngazo ngenxa yobunzima obungenakubalwa esidlula kubo.
Ke ngoko, banokubaluleka: impumelelo yobungcali kunye namathuba emisebenzi amatsha, uhambo olungalindelekanga kwiindawo ezimnandi, iindaba zomntu othandekayo kwaye ukude malunga nokubuya, ukukhulelwa kusapho, njl.
Ukuphupha umntwana efunda
Ukuphupha umntwana ofundayo kunokuba neentsingiselo ezimbini ezahlukeneyo ngokupheleleyo. Ukutolikwa kokuqala kuphakamisa ukuba masingaze siyeke amaphupha ethu, ukuba kuhlala kunokwenzeka ukuqala kwakhona kwaye senze ikamva elahlukileyo lenzeka. Ke, ukuba kunjalo, musa ukuchitha ixesha kwaye wenze konke okusemandleni akho ukukhaba uthuli, kuba indalo yonke ikulungele.
Olunye utoliko olungaqhelekanga kakhulu kwaye ekufuneka luthathelwe ingqalelo kukuba olu hlobo lwamaphupha lukwanxulunyaniswa nomnqweno osenyongweni walowo uphuphayo ukwenza imisebenzi ethile enxulumene nendawo yemfundo. Ingakumbi ukuba eli phupha livusa iimvakalelo ezilungileyo kwaye livuse ulonwabo kwindawo ethile yolwazi. Umzekelo: umntwana uphendula ngokuchanekileyo umbuzo ebalini kwaye oku kumnika ukwaneliseka.
Iphupha lomntwana ongaziwayo
Ngaba waphupha umntwana ongaziwa ngokupheleleyo? Oku kunokuthetha isidingo sokugxininisa amandla akho kwiingcamango ezintsha, iiprojekthi ezintsha kunye neengcinga ezintsha. Amaxesha ngamaxesha, ekuqaleni olu hlalutyo alunakuba nantsingiselo kuwe, kodwa kuyacetyiswa ukuba ubonakalise ukuba ngaba kukho izinto ezinokuthi zitshintshwe, ezinokuthi zilungele ukutshintsha. Ngokubanzi, emva kokubuza lo mbuzo, inqaku eliphambili liza kuza kwaye uya kuyazi into ekufuneka uyenzile.
Dlala ngomntwana ephupheni
Ubudlala nomntwana ephupheni? Liphupha elihle kakhulu! Kuthetha ukuba uya kuba nezinto ezimangazayo okanye amava amnandi nosapho lwakho okanye abahlobo abasenyongweni. Kule meko, okukhona abantwana bedlala ephupheni lakho, kokukhona eli lizwe liya kuba ngcono kwaye lihle ngakumbi.
Ngaba uphuphe ukuba wondla umntwana umthintela ukuba angadlali? Zimbini iintsingiselo ezahlukileyo kolu hlobo lwemeko. Kungenxa yokuba ukondla loo mntwana luhlobo oluthile lweemvakalelo ezimbi, ngakumbi isikizi (okanye nokuba loo mntwana ugabha ukutya), luphawu lokuma emsebenzini.
Nangona kunjalo, ukuba wondla lo mntwana ngolonwabo (ngakumbi isandi sokuhleka kunye nemidlalo) ke intsingiselo ichasene ngokupheleleyo notoliko lwangaphambili, Oko kukuthi, zilungiselele kuba uyakufumana ukunyuswa okunqwenelekayo okanye ukumenyelwa emsebenzini. .kuloo msebenzi wakhe wamaphupha, uxabisiwe kwaye unomvuzo ongaphezulu.